Vahoaka… vonon-kandroso | NewsMada
Par Taratra sur 08/01/2021
Adihevitra amin’izao ny hoe misy fiantraikany vahoaka sa tsia ny asa fampandrosoana ataon’ny fitondrana? Miara-dalana amin’izany ny hoe: tsy laharam-pahamehana, mamirapiratra ivelany, tsy azo hohanina, poakaty… Fomba fijery izay; eny, na manao vava tsy ambina tafahoatra na teny tsy tsaroana aza ny sasany.
Misy ny famendrofendroana sy ny fanatsatsoana, rehefa tena irosoana? Amin’ny lafiny politika, izay fanamby amin’ny fampandrosoana izay no nifidianan’ny vahoaka ny mpitondra, ampindramany fahefana azy hanatanteraka izany mandritra ny fe-potoam-piasana: fifanarahana sosialy sy politika, mila fanaraha-maso.
Raha tsy manatanteraka sy mahatanteraka izay nampanantenaina ny vahoaka ny mpitondra, ho velona ny hoe: tsy manaja ny teny nomena, nanao izay hahavoafidy fotsiny. Tsy lavina, misy ny zava-tsy ampoizina eny an-dalana. Natao hitsinjo mialoha izay mety hitranga mandrakariva ny mpitondra: miatrika ady, mamaha olana…
Vokatry ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 tamin’ny taon-dasa, ohatra: mafy sy sarotra ny fahasahiranam-bahoaka. Ahina hihalalina sy haharitra? Mila miatrika izay mitranga ny mpitondra, mitsinjo izay mety hitranga. Itakiana tamberin’andraikitra mazava izany fa natao hiahy mandrakariva ny vahoaka ao aminy izy ireo.
Misakana ny fanatanterahana ny fanamby ve izay? Na andeha hanamarinan-tena amin’ny tsy fahatanterahana… Safidy izay, fahasahiana, fijoroana, firosoana… Hanao ahoana? Indrindra ny amin’ny hoe fiainam-bahoaka… Adihevitra ny hoe misy fiantraikany mivantana amin’ny fiainam-bahoaka ve ny asa fampandrosoana amin’izao?
Tsy anjaran’ny vahoaka koa ve, ohatra, ny miezaka miova sy manova ny hoe fandrosoana ho amin’ny fihatsaram-piainany? Tsy miandry fotsiny na mifikitra amin’ny efa mahazatra na hilaozan’ny fandrosoana aza: hitarika sarety sy posy ihany ve amin’ny fisian’ny “tramway”, ohatra? Mila mivonona sy sahy amin’ny fandrosoana…